ရန်ကုန်မြို့သစ် ပထမအဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခြောက်ခုအတွက် တင်သွင်းထားေ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့သစ် ပထမအဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခြောက်ခုအတွက် တင်သွင်းထားေ?
NYDC ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးသိမ်းဝေ
ရန်ကုန်၊ မတ်၉- ရန်ကုန်မြို့သစ် ပထမအဆင့် အခြေခံအဆောက် အအုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ခြောက်ခုအတွက် တင်သွင်းထား သော EOI 77 ခုရှိကြောင်းသိရ သည်။
”ရန်ကုန်မြို့သစ်ပထမအဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်း ခြောက်ခုအတွက် EOI တင်သွင်းမှုစုစုပေါင်း ၇၇ ခုရှိခဲ့ပါတယ်။” NYDC ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးသိမ်းဝေ ကပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ၁၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့သစ်ပထမအဆင့် အခြေ ခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းခြောက်ခုအတွက် NYDC Challenge Tender ပထမအဆင့်စတင်နိုင်ရန် လုပ် ငန်းဆောင်ရွက်လိုမှု အဆိုပြုလွှာ (Expression of Interest – EOI) ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း၊သတ်မှတ် ထားသည့် နောက်ဆုံးတင်သွင်း ရက်မှာ ၂ဝ၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းကရှင်း ပြသည်။
လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီအ လိုက်တင်သွင်းမှုစုစုပေါင်းမှာ Power Supply and Distribution အတွက် ၂ဝ၊ Public Transport System အတွက် ခုနစ် ၊ Cyber Connectivity Infrastructure အတွက် ၁၃၊ Municipal Waste Disposal အတွက် ၁၅၊ Natural Gas Supply and Distribution အတွက် ၁၄ နှင့် Convention Center အတွက် ရှစ်ခု စုစုပေါင်း EOI ၇၇ ခုတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
”လုပ်ငန်းခြောက်ခုအတွက် တင်သွင်းလာတဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့ အစည်းပေါင်း ၄၅ခုရှိပြီးမြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ ဖင်လန်၊ ဂျပန်၊ ဟောင် ကောင်၊ တရုတ်၊ အီတလီ၊ ကိုရီး ယား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ သီရိ လင်္ကာ၊ ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်အစရှိ တဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံကပါဝင်ပါတယ်။ တချို့ကုမ္ပဏီတွေက လုပ်ငန်းကဏ္ဍ တစ်ခုထက်ပိုပြီး ပါဝင်လုပ်ဆောင် ဖို့ တင်သွင်းထားပါတယ်”ဟု ဦးသိမ်းဝေက ပြောသည်။
တင်သွင်းလာသည့် အဖွဲ့ အစည်း ၄၅ ခုထဲတွင် လေးခုမှာ EPCContractors (Engineering, Procurement and Construction) Contractors (ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်မည့် ကန်ထရိုက်တာ) အနေဖြင့်လုပ် ကိုင်ရန်စိတ်ပါဝင်စားသည်ဟု တင်သွင်းထားကြောင်း၊ ရန်ကုန် မြို့သစ်ပထမအဆင့် အခြေခံအ ဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သည့် NYDC ကကျင့်သုံးမည့် Public-Private-Partnership (PPP) model အရရွေးချယ်ခံရသော အဖွဲ့အစည်း နှင့် NYDC တို့ပူပေါင်းပြီး Design, Invest, Build and Operate (ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စီမံလုပ်ကိုင်ခြင်း) ပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ပြော သည်။
”ဒါကြောင့်မို့ EPC Contractor အဖြစ်ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ အနာ ဂတ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကို ဦးစီး လုပ်ကိုင်မယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင် မယ့် အခွင့်အရေးကို ရရှိနိုင်ပါ တယ်” ဟု¤င်းကဆိုသည်။
NYDC အနေဖြင့် စီမံကိန်း နှင့်ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းချက် များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ပုံစံ (cooperation model) များကို EOI တင်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေထံကို ဆက်သွယ်ပေးပို့ သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
အဲဒီကနေတစ်ဆင့် နောက် ဆုံး ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ် ကြားပြီး အသေးစိတ်ဆက်လက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ဦးသိမ်းဝေက ဆိုသည်။
အထက်မင်းလှရှိ ရေနံမှော်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် မီးလောင်မှု ၂၄ နာရီတိုင် မငြိမ်းနိုင်သေးဟုဆို
'ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက် တွေကို ပရိသတ်တွေကို ချပြချင်တာကြောင့် ရိုးသားစွာနဲ့ပဲ သီခ??
အာဖဂန်နစ္စတန် ပြဿနာကို တရုတ်နဲ့ ပါကစ္စတန်တို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ အထက်တန်းကျောင်းသား အချို့အပါအဝင် လူငယ်အများစု မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမ?